I-Celery | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | April 2020
Indlela yokukhulisa i-coreopsis endaweni yami
I-flower coreopsis ichazwa ngencazelo njenge-sunflower encane noma i-chamomile. Lesi sitshalo esingapheli sikhuthazelela ukungabi nomswakama futhi sizoqhakaza kuze kufike isithwathwa sokuqala. I-Coreopsis ihlala ezindaweni ezishisayo zase-Afrika, eNyakatho Melika naseHawaii. Isitshalo sikhula kufika ku-1 m ubude. Izimbali ezinhle zilingana no-10 cm.
Ukusetshenziswa nokusetshenziswa kwesilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi, izinzuzo kanye nokulimala
Namuhla, akukho ukudla, ngaphandle kokungafani okungajwayelekile, kuphelile ngaphandle kwesilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi. Lo mifino eluhlaza unomthamo omkhulu wezakhi ezivame ukuvuselela umzimba futhi usize ekwelapheni izifo eziningi. Ake sibone ukuthi yisiphi isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi esihle futhi singcono kanjani ukuyisebenzisa ekudleni kwakho. Ukwakhiwa kwamakhemikhali wesilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi Ukwakhiwa kwemifino ngaphezu kwamaprotheni, amafutha kanye nama-carbohydrate ahlanganisa inani elikhulu lamavithamini, amaminerali kanye ne-fiber.
Indlela yokusindisa isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi ebusika, ukuvuna amavithamini ekhaya
Isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi yisitshalo se-biennial sesigaba sesambulela. Kuvame ukusetshenziselwa ekulungiseleleni izitsha ezihlukahlukene: okokuqala, okwesibini, okushukela. Isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi singakhula ezweni lakho, njengoba lesi sitshalo sijwayele kunoma yisiphi isimo sezulu, isithwathwa. Lapho kuvuna isitoreji Isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi sivuna ekwindla sekwephuzile, libekezelela kalula iqhwa, ngakho-ke ungathatha isikhathi sokuvuna.
Ukutshala nokunakekela isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi ensimini
Ukukhula komswakama we-celery akuwona umsebenzi onzima, kodwa kudinga ukunakekelwa nokufinyelela. Phela, kuhle kakhulu ukujabulela ama-saladi anomsoco ebusika ngemifino ehlongozwayo ensimini yabo. Umuntu wesaba isikhathi eside sokuvuthwa kwesilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi, umuntu akafuni ukumnika isikhathi sakhe.
Yini ewusizo nokuthi ungadla kanjani isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi
Isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi siyaziqhenya indawo phakathi kwemifino enempilo kakhulu. Ngisho nasezikhathini zasendulo kwakusetshenziswa njengesithako semithi. Esikhathini sethu, imifino yemifino ayiyazi nje ukuthi iyindlela yokwelapha yendabuko, kodwa futhi njengengxenye ehlwabusayo futhi ewusizo yokudla kwansuku zonke. Umswakama Isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi Isilimo esiliva esidliwayo esinamagatsha anamanzi yisitshalo se-biennial esingenawo amakhaza omndeni wakwa-Umbrella.
Izinzuzo zesilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi kubantu
Isikhathi esaziwa kakhulu isiko lesilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi (leaf, stem kanye nezimpande) sekuyisikhathi eside singasetshenziselwa ukunambitheka nokuthuthukisa ukunambitheka kwezitsha, kodwa nangokwemvelo kanye nemithi yendabuko, okungukuthi njengendlela yokuthuthukisa umsebenzi wobulili wamadoda. Lesi sihloko sizokhuluma ngezakhiwo zokuphulukisa nendlela yokusebenzisa imifino emangalisayo.
Ingabe isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi kudingeka ihlanzwe ngaphambi kokusetshenziswa?
Nakuba isizalo sesilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi sivela eMedithera, isiko sithole ukuzethemba ngokujulile kwezinye izindawo ezisenyakatho, kuhlanganise neRussia ne-Ukraine. Kuyaziwa ukuthi zonke izingxenye zesitshalo kufanelekile ukudla - kusukela empandeni kuya emigqumeni nemifino, kodwa akuwona wonke umuntu owaziyo ukuhlanza isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi futhi kungadingeka yini ukukwenza.
Izici zokulima isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi nokumnakekela endle
Abantu babonga iphunga futhi banambitha izimfanelo zesilimo esidliwayo esidliwayo esinamagatsha anamanzi kungekudala: lesi sitshalo sesetshenziselwe ukupheka amakhulu eminyaka, nakuba izikhombisi zalo zibuyele emuva emibhalweni yasendulo yesiGreki; esikhathini esidala, kwakucatshangwa kuphela njengomuthi. Namuhla, abalandeli abaningi bokudla okunempilo nokunempilo bahlanganyela ekukhuleni kwesola esidliwayo ezindaweni ezizimele.
Izici zokusetshenziswa kwesilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi nge-pancreatitis
Ngokungangabazeki, imifino nezithelo ziqukethe izakhi eziningi ezidingeka umzimba. Ukwenza ukudla, kubalulekile ukucabangela isimo sempilo, ngoba, naphezu kwezinqolobane ezicebile zamavithamini, imikhiqizo eminingi iphikisana nezifo ezithile. Ukwakhiwa kwamakhemikhali kanye ne-caloric yomkhiqizo Yidla kokubili izimpande zezitshalo kanye nenxenye eluhlaza yesilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi, aqukethe: amavithamini: A, B1, B2, B3, B5, B6, C, E, K; ama-macro- kanye nama-microelements: i-boron, i-calcium, i-chlorine, i-iron, i-magnesium, i-manganese, i- phosphorus, i-potassium, i-selenium, isulfure, i-zinc.
Izici zokulima nokunakekela izimpande zesilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi endaweni evulekile
Izimpande ze-Celery zibhekisela ezitshalweni zonyaka okhulayo. Lesi sici sivame ukuvimbela ama-agronomists, kepha ngokwenza ukuthi akunzima ukutshala isilimo esidliwayo esidliwayo esinamagatsha anamanzi e-dacha sinikeze imikhuba ethile yezolimo. Ezinqunjini zokulima, kanye nemithetho eyisisekelo yokunakekela isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi, funda ngezansi.
Iyini inhlanganisela yokwelapha yelamula, uju nesilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi
Umuthi wendabuko unombolo enkulu yazo zonke izinhlobo zemithi yemvelo ephephile emzimbeni. Bayazikhandla ngokuthinta indawo yenkinga ngaphandle kokubangela ukusabela okubi noma eminye imiphumela emibi. Enye yezinto ezifunwa kakhulu futhi ezibalulekile empilweni ingumxube welamula, uju nesilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi.
Izici zokutshala izimpande zesilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi ezivela emakhaya ekhaya
Izimpande eziqhumayo zesilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi ziyimifino efunwa kunoma iyiphi insimu. Ukuze ukhule isivuno esikhulu salesi sitshalo, umuntu kufanele akhethe izinhlobo ezihlukahlukene futhi alandele izincomo ezichazwe ngezansi. Izimpawu zesitshalo kanye nezinhlobo zayo Isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi kungokwemikhakha ye-biennial yomndeni wesambulela. Izici zalo zimi kanje: ukuphakama kwamahlathi kuze kufike ku-1 m nge-rosette enkulu eluhlaza; amaqabunga ahlakazwa, aluhlaza okwesibhakabhaka, enephunga elimqoka; Izitshalo zempande zenziwa ngonyaka wokuqala; isifo se-tuber nxazonke noma esimise okwesibindi; umbala we-tuber uyimpunga noma i-beige-white, i-pulp imhlophe noma ukhilimu; i-blooms futhi inikeza imbewu lapho ihlwanyelwa futhi.
Izici zokusetshenziswa kwesilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi nge-gout
Ngenxa yobuningi bezakhi zesilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi yi-adjuvant ephumelelayo ngempela futhi isithako esiyinhloko sezidakamizwa ze-gout. Ukuzijwayeza okuningiliziwe nezakhiwo zayo ezingavamile, ukwakheka nezindlela zokusebenzisa kuzokusiza ekwelapheni nasekuvimbelweni kwalesi sifo. Kuyini i-gout? Lesi yisilonda samalungu, okubangelwa ukuphazamiseka kwe-endocrine.
Izici zokusetshenziswa kwejusi yesilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi
Isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi sithandwa ngabaningi, lesi sitshalo singayithokozisa ngemifino enomusa nephunga elimnandi, kanye nesitshalo esiyimpande esanele ngokwanele. Kodwa-ke, bambalwa abantu abazi ngezindlela zokuphulukisa zejusi zalesi sitshalo. Kungaba nethonya elinamandla emzimbeni, kanye nokugcina impilo ezindaweni eziningi. Lesi sihloko sizoxoxa ngezinzuzo eziyinhloko kanye nokulimala kwerayisi yesilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi, kanye nokuchaza ngokuningiliziwe ukuthi ungakanani ngosuku nokuthi uphuze kanjani isiphuzo sokuphulukisa.
Okuphawulekayo kokusebenzisa isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi ukusetshenziswa kwempilo yabesifazane
Ngokuqala kwentwasahlobo emashalofini ama-supermarket aqala ukuvela imifino enomnandi ebizwa ngokuthi i-celery. Emakhulwini amaningi eminyaka, lo mkhiqizo oyingqayizivele uthathwa njengokungabi yisitolo esigugu samavithamini namaminerali, kodwa futhi usizo olubalulekile ekulwa nezifo eziningi eziyingozi. Lesi sihloko sihlongoza ukujwayelana nezinhlobonhlobo zesilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi, izakhiwo zayo ezizuzisayo, kanye nokusetshenziswa nokuphikisana.
I-Thuja entshonalanga "i-Brabant": ukufika, ukushiya, sebenzisa ukuhlela indawo
Indlela yokutshala idiot i-ivory on the cottage ehlobo
Ungayigcina kanjani ithanga eliphelele nelisikiwe ekhaya: kubhaluni noma esiqandisini?
Ukudla kwama-parrots: kungenzeka yini ukuba badonsa futhi kuzokwenzekani uma uyayinikeza?
Indlela yokusika i-orchid peduncle ngokufanele emva kokuchichima futhi kufanele kwenziwe?
Imikhosi ehlanganisiwe: utamatisi okhulayo "i-truffle yaseJapane"
Izinhlobo ze-sansevieri nencazelo yazo
Uhlobo luni lwe-acai berry futhi yiziphi izinzuzo zabo?